PRG သည်ဘရွတ်ကလင်တွင် VER Camera ပြင်ဆင်ခြင်းဌာနကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ဘရွတ်ကလင်၏တစ်ခုတည်းသောရပ်နားနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အသံလွှင့်ခြင်းအတွက်အလင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပညာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » PRG သည်ဘရွတ်ကလင်တွင် VER Camera ပြင်ဆင်သည့်ဌာနကိုဖွင့်သည်။ ဘရွတ်ကလင်၏တစ်ခုတည်းသောရပ်နားနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အသံလွှင့်ခြင်းအတွက်အလင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပညာများ။
PRG သည်ဘရွတ်ကလင်တွင် VER Camera ပြင်ဆင်သည့်ဌာနကိုဖွင့်သည်။ ဘရွတ်ကလင်၏တစ်ခုတည်းသောရပ်နားနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အသံလွှင့်ခြင်းအတွက်အလင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပညာများ။
ဘရွတ်ကလင်း, New York-ဇူလိုင်လ 22, 2019 - PRG, ဖျော်ဖြေရေးပွဲနှင့်အခန်းအနားထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များနှင့် Cine နှင့်ထုတ်လွှင့်ကင်မရာ, မှန်ဘီလူးများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စာရင်းများအတွက်လူသိများသည်၎င်း၏ဌာနခွဲ, VER ကင်မရာ, ဖွင့်လှစ်ကြေညာ ဘရွတ်ကလင်း, New York မှာနေတဲ့ကင်မရာအသစ် prep စက်ရုံ၏။ အဆိုပါလန်းလာသောဘရွတ်ကလင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မီဒီယာအသိုင်းအဝုိင်းမှမျက်စိနှင့်အတူ, သစ်ကို 25,000 စတုရန်းပေစက်ရုံရုပ်ရှင်၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, scripted နှင့် unscripted ရုပ်မြင်သံကြား, အားကစား, ဂီတ, အထူးဖြစ်ရပ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနယူးယောက်ဧရိယာ၌အလုပ်လုပ်ကိုင် ။
ရေတွင်း-တပ်ဆင်ထား facilityincludes ကင်မရာစစ်ဆေးမှုများထွက် bays, ကွီးကွပျမှူးကုန်တင်ဓာတ်လှေကားနှင့်တစ်ဦးအဆင်ပြေမြေညီထပ်တင်အထိုင်, အစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစီးတီးရှုပ်ထွေးအတွက် 147 41st လမ်းမှာတတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအလွယ်တကူတည်နေရာကိုလည်းပါးရည်နပ်ရည်, စက်ရုံ-လေ့ကျင့်သင်ကြားကင်မရာ prep န်ထမ်းများ, အတွေ့အကြုံရှိမှန်ဘီလူးပညာရှင်များနှင့်ကင်မရာအင်ဂျင်နီယာများအဖြစ် 24 /7နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ clients များပေးပါသည်။
clients ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာများ, မျက်ကပ်မှန်နှင့်ထောက်ခံမှုဂီယာ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသိုလှောင်မှုထဲကတစ်ခုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ လိုအပ်မှု ARRI, အနီရောင်, အဘို့ဖြစ်၏ရှိမရှိ Sony ကတစ်ဦးအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အဖြစ်မှန် programming ကိုတစ်ဦး Enhanced ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် LED နံရံတစ်ခုခင်းကျင်းတစ် 35Live များအတွက် Episode, တစ်ဒါဇင် cam-corders များအတွက် Panasonic ကသို့မဟုတ်အခြားအထူးပြုကင်မရာများ! 4K Cine-စတိုင်အထုပ်သို့မဟုတ်အခြားထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများ, အဘရွတ်ကလင်းကဆေးရုံနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကအဆင်သင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကဘရွတ်ကလင်းနှင့်ပတ်လည်င်သောဖန်တီးမှု Vibe ကိုချစ်" သူ Carl ကွတ်, ရုပ်မြင်သံကြား & ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ VP ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကဒီတအရွယ်အစားအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုက်ညီမပေးကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံပစ္စည်းကိရိယာများ၏ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားခင်းကျင်းပူဇော်နှင့်တကယ်က client များ '' အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြာသောအရာကိုရတော်မူသောငါတို့၏အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများနှင့်အတူကထောကျပံ့ဒါကြောင့်ပါပဲ။ သေးငယ်တဲ့ဘဏ်ဍာကနေကျနော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုမှအကျိုးကြောင်းကိုအဓိကအင်္ဂါရပ်များမှကျနော်တို့ဘရွတ်ကလင်းထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာရန်စီစဉ်ထားသည်။ "
PRG သြဂုတ်လ 2018 အတွက် VER ရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်များ၏ပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်သက္ကာကိုယနေ့စုံဆုံးနှင့်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံလွှင့်စျေးကွက်များတွင်နည်းပညာအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
PRG နှင့် VER ကင်မရာဘရွတ်ကလင်းစေခြင်းငှါငါအဘယ်အရာကိုမြင်စေရန်, သူ Carl ကွတ်မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]။ ဒါမှမဟုတ်သွားရောက်ကြည့်ရှု: 147 41st လမ်း, 3rd ညီထပ်, Suite တစ်ဦးကဘရွတ်ကလင်နယူးယော့, 11232.www.prg.com
ထုတ်လုပ်မှု Resource Group ရဲ့အကြောင်း
PRG ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဖြစ်ရပ်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသူသည်နှင့်ငှားရမ်းထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၏အကြီးဆုံးစာရင်းရှိပါတယ်။ PRG အသက်ရှင်သောဂီတ, တီဗီ / ရုပ်ရှင်, ဘရော့ဒ်ဝေး, အားကစား, ဂိမ်းကစားခြင်း, ကော်ပိုရိတ်အတွေ့အကြုံနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များစျေးကွက်ဖောက်သည်တစ်ဦးခင်းကျင်းရန်ပြည့်စုံနဲ့သတိပညာရှိန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ client နှင့်မိတ်ဖက်ဘဝသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များကိုရောက်စေဖို့အသံ, ဗီဒီယို, အလင်းရောင်, မသမာမှုများနှင, ဇာတ်စင်နှင့်ရှုခင်းနှင့်အလိုအလျောက်စနစ်များအတွက်အတွေ့အကြုံ PRG ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အတွေ့အကြုံနှင့်အတိမ်အနက်ကိုပေါ်မူတည်သည်။ မြောက်အမေရိက, တောင်အမေရိက, ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာရှ, သြစတြေးလျကိုဖြတ်ပြီး 70 ရုံးများနှင့်အတူ PRG ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ PRG အဆိုပါယော်ဒန်မြစ်ကုမ္ပဏီ, GSO Capital Partners နှင့် PRG စီမံခန့်ခွဲမှုကပိုင်ဆိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.prg.com/
Lewis ကဆက်သွယ်ရေးကပြင်ဆင်ပြန်ကြားရေး: [အီးမေးလျ protected].
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-07-23
ယခင်: ဟာ Off 40% နှင့်အတူအနီရောင်ဧရာပွဲနွေရာသီ
နောက်တစ်ခု: ဂျယ်ရမီ Renner သရုပ်ဆောင် "ဒီနွေရာသီ Jeep ၏" ကင်ပိန်းကှတျချ Anamorphic / i မှန်ဘီလူးတွေနဲ့ပစ်ခတ်